Qoyska Cabdi Maxamuud oo dawladda ku eedeeyey inay jirdileen iyo booliska oo iska fogeeyey - BBC News Somali
Image caption Qoyska cabdi waxay dawladda ku eedeeyeen jirdil, dawladdana way iska fogeysay.
Lahaanshaha sawirka Twitter Addis Standard
Image caption Jen Zeyinu Jemal, taliyaha booliska federaalka Itoobiya
Dawladda Itoobiya ayaa ku gacan sayray eedeyntaas. Taliyaha Booliska federaalka ee Itoobiya, Jeneraal Zeyinu Jemal wuxuu BBC u sheegay "inay been tahay. Ma jirto cid garaacday. Inkastoo lagu eedeeyey dambiyo culus, si wanaagsan oo ah sidii madaxweyne hore ayey ula dhaqmayaan ayuu yiri".
Isagoo ka hadlayey in isbitaal loo ogolaaday iyo in kale ayuu yiri Jeneraal Zeyinu Jemal "Isbitaal marka la aadayo waa in bukaan socod eegtada xabsiga ku dhex taalla ay u dirto. Haddii uu xanuunkiisa weyn yahayna isbitaal ayaa loo dirayaa. Nidaamka ayaa sidaas ah, cid si gaar ah wax loogu samaynayo ma jirto" ayuu sii raaciyey.
Image caption Jimcaha ayaa la filayaa in maxkamadda mar kale la hor keeno
Dhamaan xubnahan ayaa loo haystaa sida horay loo sheegay kicinta dhalinyaro Jigjiga joogta oo gaystay "dhibaato, dil iyo khasaare kaleba leh".
Ra'yi kala duwanaanshaha dadweynaha ayaana keenay in si weyn loogu doodo baraha bulshada, walow maamulka Dowlad-deegaanka uusan weli ka hadlin dawcada ka dhanka ah Cabdi Maxamuud Cumar iyo xubnaha kale ee la xiran.
Image caption Eedeymo culus ayaa la sheegayaa in lagu haysto Cabdi Maxamuud Cumar
Warbixintii u dambaysay ee hay'adaha xuquuqul insaanka ay soo saareenna waxaa lagu sheegay in jeelka weyn ee Jeel Ogaadeen loo yaqaano laga gaystay dhib badan oo maxaabiista ku dhacay.
Image caption Shidaalka deegaanka laga helay ayaa aaggaas ka dhigay mid muhiimad gaar ah leh